Iphupha malunga ne-abladen Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kuthi, ukothula into kunokuthetha ukuhambisa izinto, ubutyobo okanye izinto ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ukuyibeka khona. Sizikhuphelela izinto apho sicinga ukuba zezazo kwaye ngenxa yoko sizifumana kwenye indawo.
Ngamanye amaxesha sithetha "ngokulahla" xa sithetha ngentlungu esentliziyweni yethu, umzekelo. Siyazishiya iinkxalabo zethu kwaye xa sikhupha iintlungu zomphefumlo wethu nomntu esimthandayo, siqaphela indlela iintliziyo zethu eziba lula ngayo ngokuthetha.
Kodwa ithini into etolikwa liphupha "ukhuphele" ngomfanekiso wephupha kwaye ungazicacisa njani ngokuchanekileyo njengomntu ophuphayo?
1 Uphawu lwephupha «ukhuphelo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukhuphelo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukhuphelo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukhuphelo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, umfanekiso ophuphayo "ukhuphelo" ubonisa umntu ophuphayo ukuba usondela kwiinjongo zakhe xa eshiya iphupha. Ukulinganisa kwaye ikhuphe iingxaki ezizisa kwimeko yobomi yangoku. Kuxhomekeke kwinto oyikhuphele ephupheni, oku kubonisa ukuba mkhulu kangakanani umthwalo owuphethe ngokwenyani.
Nabani na onengxaki yokukhuphela into ethile kwi el mundo Ngamaphupha, umzekelo, wokurhuqa imoto, unokukwenza uqonde ukuba ezinye izinto ebomini zihlala zilula. ayinakusombululeka Bazi. Nokuba uzama ukwenza oku nzima kwaye ngamandla akho onke.
Umfanekiso wephupha «ukhuphelo» unokuvela nakwamaphupha ngohlobo lokuhanjiswa. Umzekelo, ukuba ufuna ukulahla amalahle okanye igrabile emnyango wakho, ungakwenza oko kungekudala. Ukuphucula ithemba lezemali. Kwelinye icala, ukuba uphosa inkunkuma okanye ezinye izinto ezingathandekiyo phambi kwephupha, kuya kufuneka uthathele ingqalelo imiqobo kubomi bokwenyani. Ezi ngokungalindelekanga zingena endleleni yakho kwaye kuya kufuneka wenze iinzame zokuyikhulula kwakhona.
Mhlawumbi kwimeko yephupha ozibonileyo ngelixa uphonsa okanye ulahla inkunkuma phambi kwabanye abantu. Ukuba uziva wonwabile ngelixa usenza oku, kusenokwenzeka ngenxa yokuba uvukile Imvakalelo yokuziphindezela uvakalelo. Kusenokwenzeka ukuba ubukhe wadlalwa kakubi ngaphambili kwaye ulindele ixhala lokuba uphinde ubuyele komnye umntu. Nangona kunjalo, lumka kwaye ucinge kabini ukuba le yindlela oza kuhamba ngayo. Ngamanye amaxesha ukungakhathali kunye nokuhamba usiya kwenye i-ego yomnye ngokungakhathali kunokwenza okuphindezelayo.
Uphawu lwephupha «ukhuphelo» - ukutolikwa kwengqondo
Kwiitoliki zengqondo zamaphupha, umfanekiso "wokukhuphela" sisipili sethu. Ubomi bomphefumlo. Ukuba ufuna ukukhuphela into ephupheni, i-subconscious yakho ibonisa ukuba kukho ubunzima obukhulu emphefumlweni. Ukuba uhlala uqwenga iintlungu kunye noloyiko obuziswa bubomi, kungekudala okanye okomntu onamandla uya kuguqa ngamadolo.
Uxinzelelo lunokuthi "lucele" emva kwephupha malunga nesimboli. Ufuna ukulahla into ethile, phuma UAlivio kwaye ungaphefumla ngokukhululekileyo kwakhona.
Ukuba ufumana iimvakalelo zokuvunywa kule meko, kunokuba luncedo ukufuna uncedo kwiingcali. Oku kunokukunceda ufike emazantsi obunzima obubonwayo kwaye ubonise iindlela zokuphelisa kwaye uzilahle.
Ngubani ekufuneka ekhuphele into ephupheni ngamanye amaxesha ebonisa ukuba ukulungele ukuya kwi isigaba esitsha sobomi ukuhamba. Ushiya ngasemva kwendala, engasasebenziyo, kwaye ngokukhuphela ukulungele ukutshintshela kwizinto ezintsha ezinethemba.
Uphawu lwephupha «ukhuphelo» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni amaphupha okomoya, umfanekiso wephupha "ukhuphele" ubonisa ukuba iphupha linamandla. Ukungalingani ifunyenwe. Kuya kufuneka ufumane iindlela kunye neendlela zokufumana kwakhona amandla akho angaphakathi kunye nokulinganisela.